Hotely 10 tsara indrindra any Afrika 2022 - Victor Mochere
Matetika ianao no manomana ny aventure manaraka anao alohan'ny hifaranan'ilay iarahanao. Ny fitiavanao mikaroka an'izao tontolo izao dia nanampy tamin'ny fitomboana sy ny fanohanana ny indostrian'ny dia. Tianao ny mijanona ao amin'ny hotely manome traikefa tsara indrindra, na fialan-tsasatra amin'ny tanàna izany, fialan-tsasatra am-pitiavana, traikefa an-tany efitra, na fialan-tsasatra amoron-dranomasina. Na maniry an'io suite penthouse io ianao, bungalow ambonin'ny rano, na villa ski izay mifanaraka amin'ny fianakaviana manontolo, dia misy safidy ho anao foana. Ny trano fandraisam-bahiny dia nomena naoty amin'ny tranony, ny toerana misy azy, ny serivisy, ny sakafo ary ny sandany amin'ny ankapobeny.
Ireto ny hotely 10 tsara indrindra any Afrika.
ary ankoatra ny Phinda Vlei Lodge
Phinda Private Game Reserve, Afrika Atsimo
Matetsi Private Game Reserve, Zimbaboe
Khwai River Lodge, Safari Belmond
Mfuwe Lodge an'ny orinasa Bushcamp
ary ankoatra an'i Ngala Safari Lodge
Kruger National Park, Afrika Atsimo
Top 20 hotely tsara indrindra eran-tany 2022
telefaona finday tsara indrindra misy 2022